Herinandron'ny fivezivezena eropeana ao Ljubljana, renivohitr'i Slovenia
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Herinandron'ny fivezivezena eropeana ao Ljubljana, renivohitr'i Slovenia
Isan-taona, mandritra ny 16 taona misesy, ny tanànan'i Ljubljana dia mandray anjara amin'ny Herinandron'ny fivezivezena eropeana eo anelanelan'ny 16 sy 22 septambra, ny fampielezan-kevitra, izay mampivondrona tanàna eropeana an'arivony amin'ny ezaka ataon'izy ireo hampiroborobo ny olona sy ireo karazana fivezivezena ara-tontolo iainana.
Ny tanànan'i Ljubljana miaraka amin'ireo departemanta, serivisy, orinasam-panjakana ary andrim-panjakana miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka hafa, fikambanana, sekoly ary akanin-jaza dia mikarakara herinandro misy hetsika isan-karazany, mahaliana ary manabe manaitaitra ny fahazarana mivezivezy maharitra.
EMW 2017 eo ambanin'ny teny filamatra »Ny fizarana dia manosika anao bebe kokoa« dia entina hampirisihana ny fampiasana iraisan'ny fitaovam-pitaterana, hampiroborobo ny fizarana fizika ary ny fampifangaroana ireo fomba mivezivezy amin'ny dian-tongotra karbaona ambany amin'ny dia iray.
Miaraka amin'ny fepetra maharitra maharitra 10 narafitra, hetsika maharitra 8 herinandro, hetsika 32 andro ary hetsika marobe ao amin'ny vondrom-piarahamonina Distrika rehetra ao an-tanànan'ny Ljubljana amin'ny andro tsy andrenesana fiara dia asehontsika indray amin'ity taona ity ny fomba fampiharana ny »maintso «Tanjona efa napetraka tamin'ny taona 2007 tao amin'ny Ljubljana Vision 2025 izay nahazoanay ny anaram-boninahitra Eoropeana Green Capital 2016 sy loka roa ho an'ny herinandro ho an'ny fivezivezena eropeana (ho an'ny zava-bita tamin'ny faritra 2003 sy 2013).
Ny fepetra maharitra amin'ity taona ity dia:
• Fanesorana bisikileta »teboka mainty«
Amin'ny ezaka fanatsarana ny toetran'ny bisikileta ao Ljubljana dia manafoana ny fahalemena amin'ny fotodrafitrasa amin'ny bisikileta amin'ny toerana telo izahay.
• Fametrahana làlan-bisikileta eo akaikin'ny lalamby Delenjska
• Fametrahana làlan-bisikileta amin'ny faritra iray amin'ny làlan'i Vojkova
• Fanitarana ny rafitra BicikeLJ
Amin'ity taona ity isika dia hanangana gara vaovao fito miaraka bisikileta 70 amin'ny ampahany amin'ny rafitra fanofana bisikileta an-tanàna BicikeLJ. Ity dia hanitatra bebe kokoa ny tamba-jotra miaraka amin'ireo gara 51 amin'ny bisikileta 510.
• Fametrahana zaridaina bisikileta KoloPark
Sehatra fialam-boly hafa iray hafa araka ny maodelin'ny zaridaina bisikileta KoloPark any Šiška, ny faritra avaratra andrefan'i Ljubljana, no noforonina, natao ho filalaovana sy hampivelarana ny fahaiza-manao amin'ny fampiasana fiara samy hafa avy amin'ny bisikileta, scooter kick, skateboards, rollerblades ary skate roller hanosika fiara. Manamora ny fandaniam-potoana mavitrika amin'ny fotoana malalaka any Bežigrad, faritra avaratry Ljubljana io.
• Fanitarana ny rafitra fiantsenana fizarana fiara
Tamin'ny taon-dasa, tao anatin'ny rafitry ny fandaharan'asa Green Green Capital 2016, dia mampahafantatra ny rafitra fizarana fiara elektrika izahay, izay mihamora kokoa noho ireo gara vaovao. Amin'ireo efa misy dia nanampy vaovao valo izahay.
• Fametrahana vavahadim-pifamoivoizana manerantany PROMinfo
Ny fivezivezena maharitra dia ampiroboroboana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fampahalalana ho an'ny drafitra fitsinjovana ny eritreritra. Nanangana vavahady iray izahay izay manolotra fampahalalana samihafa amin'ny mpampiasa momba ny toe-piainan'ny fifamoivoizana ankehitriny, ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny hakitroky ny fivezivezena ao amin'ny faritry ny tanànan'ny Ljubljana, ny ora hahatongavan'ny aotobisy, ny toerana misy eo amin'ny terminal Bicikelj, ny fisian'ny zotram-piantsonana tantanan'ny orinasan'ny tanàna LPT, Sns
• Fampidirana seha-pifandraisana elo »Pusti se zapeLJati« (Avelao ho entina ny tenanao)
Ny sehatra fifandraisan-davitra mikendry ny fampiroboroboana sy ny fanentanana amin'ny lohahevitra momba ny fivezivezena maharitra dia nampiasaina hamporisihana ny olom-pirenena sy ny mpitsidika an'i Ljubljana hivezivezy manodidina ny tanàna amin'ny alàlan'ny bisikileta, fitateram-bahoaka na endrika hafa fivezivezena amin'ny tontolo iainana. Ny teny filamatra dia manasa azy ireo ihany koa - rehefa mahafoy ny fiara sy ny ahiahy rehetra aterak'izy ireo izy ireo - mahatsapa ny fitempon'ny fon'ny tanàna ary mamela azy ireo ho entin'ny hatsaram-panahin'i Ljubljana, ny hatsarany sy ny hatsarany. Tsy ny fifamoivoizana ihany no ilazana ny teny filamatra, fa fanehoana ny toetran'i Ljubljana ihany koa ary manasongadina ny fomba fandraisan'ny fivezivezena maharitra maharitra ho an'ny fahasalaman'ny olom-pirenena. Mandritra izany fotoana izany dia manao antso ny amin'ny hetsika maharitra sy ny fanovana ny fahazarana mandeha »amin'ny« greener ».
• Fanombohana ny tetikasa URBAN-E
Ao anatin'ny rafitry ny URBAN-E dia manangana fiaraha-miasa amin'ny orinasan-tsolika Petrol 50 tobin-jiro vaovao ho an'ny fiara elektrika izahay ary mampiditra sehatra web fivezivezena maharitra miaraka amin'i Bratislava sy Zagreb. Ao anatin'ny tetikasa dia mikasa koa izahay ny hampiditra serivisy taxi mampiasa fiara elektrika. Ny tetik'asa, iarahan'ny EU famatsiam-bola, dia hitohy manomboka ny 1 Oktobra 2017 ka hatramin'ny 31 Desambra 2020.
• Ny fahazoana fitaovana fandrefesana haingana dia haingana sy trano telo
Izahay dia mameno ny fepetra hiantohana ny fiarovana ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fampidirana rafitra fanaraha-maso hafainganam-pandeha vaovao - fitaovana fandrefesana mandeha ho azy sy trano telo.
"Think Asia, Think Hong Kong" dia mitaona ny mpihaino an'i Londres
Porter Airlines dia manitatra ny serivisy Orlando-Melbourne amin'ny tanàna telo